Mmetụta nke COVID-19 na azụmahịa kọmputa | ECommerce ozi ọma
Ihe niile dị n'oge a na-agbakwunye gburugburu nsogbu COVID-19, ọbụlagodi maka mpaghara ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị. N'ihi na dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọ nwere mkpughari site na nke a na - enweghị ike iwepụta ha etu o siri metụta ọha mmadụ n’ozuzu ha. N'echiche a, ọ ga-ekwusi ike na coronavirus bụ ihe na-ebute ya na ọtụtụ ọrụ ntanetị na-arụ ọrụ na Spain na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tupu nsogbu a amalite.
Mgbapu nke coronavirus na usoro a emeela ka ọtụtụ nde ndị na-azụ ahịa nọrọ n'ụlọ ha. Enweghi ike ịpụ apụ, belụsọ ịga ọrụ, jupụta tank ahụ, gaa ahịa ọgwụ, were anụ ụlọ maka ịgagharị, zụta ọgwụ na ahịa ọgwụ ma ọ bụ gaa nnukwu ụlọ ahịa. Zụta ihe mmadụ nwere ike ịme n'onwe ya na-agbada na ngwaahịa ndị ahụ nwere ike ịchọta na ụlọ ahịa nri, ma ọ bụ ahịa ahịa. N'ọnọdụ ụfọdụ nke a nwere ike ọ gaghị ezu na ihe ndị ọzọ dị mkpa, nke azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị na-aga n'ihu na-enye ọrụ ha.
Nke a bụ nsonaazụ mbụ nke ihe COVID-19 wetara na nke bara uru na-echekwa ụlọ ahịa n'ịntanetị na mba ahụ. E wezụga nke ahụ, ha nwere ụba ahịa nke ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu na-amalite ụdị ụlọ ọrụ dijitalụ a. N'okwu a,
1 COVID-19 na azụmahịa dijitalụ
2 Gbanwee mgbawa
3 Mmetụta na nnukwu ụlọ ọrụ e-commerce
4 Eziokwu nke ngalaba ahụ hụrụ onwe ya
COVID-19 na azụmahịa dijitalụ
Mana afọ a ga-agbada na akụkọ ntolite n'ihi mpụta nke nje a dị egwu nke na-aga ịgbanwe omume na ngalaba ndị na-azụ ahịa: Mana kedu ka ọ ga-esi metụta ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa nke njirimara ndị a kpọmkwem? Dabere na nyocha emere, ahịa site na mgbasa ozi dijitalụ mụbara n'etiti 30% na 50% kemgbe March 3, mgbe ekwuputara ọrịa mbụ COVID-19 na mba ndị kachasị mkpa n'ụwa.
Site n'eziokwu a, nyiwe ntanetị na-enye nhọrọ nke ịnweta ọtụtụ ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe na-enweghị ịhapụ ụlọ. Na uru ndị ọzọ na ngwaahịa ha nwere n'ụlọ ahịa anụ ahụ na-erekwa na ikpo okwu dijitalụ. Nke a na-anọchite anya ịmaliteghachi na usoro azụmaahịa ha.
Dị ka mmejuputa ngwaọrụ dị ike n'ụdị ngwa teknụzụ nke nwere ọtụtụ nnyefe nri, egwuregwu, audiovisual ma ọ bụ ọdịbendị ọdịbendị, n'etiti ụfọdụ kachasị dị mkpa. Site na nke a, ọ na - ebuli ọnọdụ ọchụchọ onye ọrụ site na sistemu GPS. Site na mmụba nke nkà na ụzụ iji bulie ọchịchọ n'aka ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, mmetụta nke ọrịa ahụ ga-agbanwe ga-agbanwe ụzọ ahịa ngwaahịa, dịka ọmụmaatụ, iji ego ga-ebelata na iji kaadị ga-arị elu, yana azụmahịa site na ngwa ndị nyiwe ndị a na-ebu na Internetntanetị. . Ebe ọ dị ezigbo mkpa ka ị buru n'uche na site n'oge a ziri ezi na onyinye ha kachasị mkpa bụ ihe ndị a ka anyị kpughere gị n'okpuru:
Ike gị iru isi ihe ndị ọzọ na mbara ala.
O kpuchitere uzo ahia di iche-iche, site na oge ezumike na ntukwasi obi maka ihe ndi enyem-aka. Ọ bụrụ na iwepu ụdị ọ bụla.
Mmetụta ya agaghị adị njọ ma e jiri ya tụnyere onyinye nke ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ karịa.
Ha na-aka eme nke ọma na mkpa dị n’ezinaụlọ n’oge ndụ ezinụlọ n’etiti ebe ndị a emechiri emechi.
Ego na ịzụrụ site na mbenata ọnụego gị n'etiti ihe dịka 10% na 20%, n'ihe metụtara usoro azụmahịa niile.
N'ikpeazụ, ị gaghị echefu na nke a bụ omume na-eto eto kwa afọ na na nsogbu nsogbu akụ na ụba ọ nwere ike bụrụ na ọ ga-eme ka ọ sie ike maka ọdịmma azụmahịa gị.
Mmetụta na nnukwu ụlọ ọrụ e-commerce
Onye China e-commerce ibu, Alibaba, amatala na Tọzdee a na ọganihu nke ntiwapụ nke coronavirus (Covid-19) ga-enwe mmetụta na azụmahịa ya, ma na ego na uto. Companylọ ọrụ ahụ adọwo aka ná ntị na ntiwapụ ahụ na-emetụta ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere, nke ga-atụgharị gaa na mbelata ego site na mbido nkeji iri na ise a.
Ndị ọzọ e-commerce ndị ọzọ e-commerce na-emikpu n'otu ọnọdụ ahụ. Na-enye ezigbo ebumnuche banyere ọnọdụ steeti ndị ọrụ ntanetị gburugburu ụwa. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa iji mesie ya ike na Jesse Cohen, onye nyocha na Investing.com, mesiela Reuters obi ike na uru Alibaba ga-ada kụrụ "na mpaghara abụọ na-esote, n'agbanyeghị na azụmahịa siri ike iji merie mkpọmkpọ a."
Eziokwu nke ngalaba ahụ hụrụ onwe ya
Nchịkwa na ecommerce chọrọ usoro iji chebe ọdịmma nke ọrụ ọrụ a na ntanetị. Ebe nsogbu a dị, ọ nwere ike imeghe ohere azụmaahịa ọhụụ, ọ bụ ezie na ọ nweghị nsogbu.
Dị ka e guzobere na Royal Decree 463/2020 nke March 14, a na-arụ ọrụ nke nnyefe nke nri n'ụlọ na ihe ndị dị mkpa na ọkwa mba na ọnọdụ ọnọdụ mkpu n'ihi ọnọdụ nke nsogbu ahụike nke COVID-19 kpatara .
N'ịbụ onye nwere ọnọdụ a, STUART, usoro teknụzụ a na-achọ achọ nke na-ejikọ ụdị azụmaahịa ọ bụla na ndị ọrụ ụgbọ mmiri kachasị onwe ha, emejuputala usoro mgbochi kwekọrọ na ndụmọdụ ndị ọrụ nke Health, ma ndị ọrụ ya ma ndị ozi nwere onwe ha na-arụkọ ọrụ na ikpo okwu.
Ebumnuche nke inye ọrụ nke na-ebelata mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọnọdụ akụ na ụba nke ọnọdụ siri ike na mba ahụ, ikpo okwu ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ ka ndị ọrụ ya niile kpebiri ịjikọ iji nọgide na-enweta ego.
Iji mezuo ihe omume n'oge iche iche, ụlọ ọrụ ahụ emejuputa atumatu "Zero Contact" nke gụnyere izere kọntaktị n'etiti onye ozi na onye nata, ihe ndị a bụ:
Tupu ịmalite kesaa ya, a na-atụ aro ka ị jiri gel disinfectant na latex gloves iji zere ịkpọtụrụ akpụkpọ ahụ kpọmkwem. Nakwa ikpa okpu ọgba tum tum na mkpuchi mgbe niile iji kpuchie ohere ịbanye na akụkụ iku ume, mkpocha uwe na ihe eji eme ihe na disinfection kwa ụbọchị nke igbe / akpati.
Enweghị njikwa ego. Enwere ike ịjụ ma ọ bụ nyefee iwu ndị chọrọ njikwa ego na-enweghị nke a nwere mmetụta ọ bụla.
Iwu mbukota. A gwa ndị ahịa banyere mkpa ọ dị iji akpa ejiri akara mechie. A ga-ejide akpa ndị ahụ n'akụkụ (ọ bụghị site na njikwa).
Na-atụ aro uwe. A na-atụ aro ka ị ghara iwepu okpu agha ahụ na iji ogwe aka latex / aka disinfected mgbe ị na-anata usoro. Uwe ọgba tum tum anaghị arụ ọrụ dị ka ngwa ọcha. A na-atụ aro ka ị ghara iji ha na nnyefe ma ọ bụ ijizi njikwa.
Iji akpa kwesiri. Ozugbo anakọtara iwu ahụ, tinye ya ozugbo na akpa okpomọkụ ma mechie ya kpamkpam. A ghaghi iwepu nke a nke oma na ngwaahịa kwekọrọ.
Zere nchịkọta ndị nkesa na ebe nchịkọta. Debe mita 1.5. 1 otu onye n'ime ogige na uzo n'èzí na 1.5m anya n'etiti ndị nkesa.
Na-atụ aro nchekwa nchekwa. Mgbe ị na-enye iwu, a na-atụ aro ka ị hapụ ya n'ọnụ ụzọ onye nnata mgbe ị kpọsịrị ya site n'ọnụ ụzọ ya. Hapụ iwu ahụ n'ọnụ ụzọ ma chere obere mita 2 ruo mgbe onye nnata buliri iwu ahụ.
Enweghị mkpa maka mbinye aka. Dịka e kwuru n'elu, a na-atụ aro ka ị kwụsịtụ mbinye aka mbinye aka ma tinye aka na X ozugbo enyere iwu.
Oke anya na-ekwu. Ozi banyere otu esi ebufe nwere ike ịpụta na nkọwa nke iwu, dịka ọmụmaatụ: "Kpọọ mgbịrịgba ahụ ma hapụ ngwongwo ahụ na ọdịda." Ọ dị ezigbo mkpa ịgbaso ntụzi ndị a.
Disposable nkwado maka nnyefe. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-enye akwa nhicha ma ọ bụ nkwado ọzọ nwere ike ịchụpụ, enwere ike iji ya mee ihe n'enyefe iwu ka ngwa ahịa ejiri metụ ala aka ozugbo.
N'otu aka ahụ, Stuart na-etinye ndụmọdụ nke ndị isi ahụike ka ọ kwekọọ n'ọnọdụ ọ bụla.
"Site na" Zero Contact "amụma, anyị chọrọ, karịa ihe niile, na-elekọta ndị ozi chọrọ ịnọgide na-arụ ọrụ ha onwe ha. Ọ dị mkpa ka anyị niile soro ntuziaka nke Ministri Ahụike iji chịkwaa mgbasa nke nje a, n'okwu David Guasch, Onye isi Nduzi nke Stuart na Spain. “Site na ndị otu Stuart, anyị chọrọ ibuga nkwupụta ahụ iji chekwaa ahụike na nchekwa mmadụ n'ọnọdụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ịta ahụhụ ụfọdụ n'ime mgbaàmà ahụ, anyị na-atụ aro ka ndị ozi ahụ chọọ nlekọta ahụike ozugbo ma soro ndụmọdụ ndị ọkachamara ahụ ike ". Ebe nsogbu a dị, ọ nwere ike mepee ohere azụmaahịa ọhụụ, agbanyeghị na-enweghị nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » Mmetụta nke COVID-19 na azụmahịa kọmputa